၁.၁ www.medicarehb.com.mm (ဆိုဒ်) ကို Total Wellness Lifestyle Beauty Mart Co.,Ltd. ကလုပ်ဆောင်ပါသည်။
၁.၂ ၀က်ဘ်ဆိုက် သို့ ၀င်ရောက်ခြင်း၊ ကြည့်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း (သို့) မှာယူခြင်းအားဖြင့် သင်သည်ဤလက်ခံသုံးစွဲမှုစည်းမျဉ်းများဖြင့် အပြည့်အဝသတ်မှတ်ထောက်ခံကြောင်း အားညွှန်ပြနေပါသည်။ ၎င်းတို့သည်သင် နှင့် ကျွန်ုပ်တို့အကြားတရားဝင်သဘော တူညီချက်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့်သာပြင်ဆင်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့အားဆိုက်တွင်မည်သို့လည်ပတ်ပုံနှင့် ၀ ယ်ယူနိုင်သော ၀ န်ဆောင်မှုများအကြောင်းအား ဆိုဒ်တွင်ပေးထားသော မည်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ နှင့်မဆိုဖတ်သင့်သည်။ ၎င်းတို့အားဆိုက်တွင်မည်သို့လည်ပတ်ပုံနှင့် ၀ယ်ယူနိုင်သော ၀န်ဆောင်မှုများအကြောင်းကို ဆိုဒ်တွင်ပေးထားသောမည်သည့် အသေးစိတ် အချက်အလက်မဆိုဖတ်ရှုသင့်သည်။ အကယ်၍ ဖော်ပြပါ အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများအား လက်မခံနိုင်ပါက ဆိုဒ်အားအသုံးပြုမှုအားချက်ချင်းရပ်တန့်နိုင်ပါသည်။
၁.၃ ဆိုဒ်မှသင်မှာယူသောမည်သည့်ထုတ်ကုန် (သို့မဟုတ်) ၀န်ဆောင်မှုမဆိုကျွန်ုပ်တို့၏စည်းမျဉ်းများနှင့် အခြေအနေများနှင့်အညီဆောင်ရွက်သည်။ သင်တို့သည် ကျွန်ုပ် တို့၏ လုံခြုံရေးမူဝါဒကိုလည်းဖတ်ရှုသင့်သည်။
၁.၄ ဤဆိုဒ်တွင် ၎င်းတို့ကိုကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ အချိန်နှင့်တပြေးညီပြောင်းလဲရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၂။ ဆိုဒ်သို့ ၀င်ရောက်ခြင်း
၂.၁ ဝက်ဘ်ဆိုက်သည် အဆက်မပြတ် (သို့မဟုတ်)အနှောင့်အယှက်မရှိဘဲ (သို့မဟုတ်) အမှားအယွင်းမရှိလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အာမမခံနိုင်ပါ။ ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ဆိုဒ် ၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံး (သို့မဟုတ်) မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းမဆို ဆိုင်းငံ့ခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း (သို့မဟုတ်) ပြောင်းလဲခြင်းတို့အားပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင် မည်သည့် အချိန်တွင်မဆို ဆိုဒ်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို (သို့) မည်သည့်ကာလအတွက်မဆို ဆိုဒ်မရရှိခဲ့ပါက ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဆိုဒ် ၏ မှန်ကန်သောလုပ်ဆောင်မှုကို ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ရန် မကြိုးစားသင့်ပါ၊ အထူးသဖြင့်လုံခြုံရေး၊ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း၊ ခိုး၀င်ခြင်း (သို့မဟုတ်) မည်သည့်ကွန်ပျူတာစနစ်၊ ဆာဗာ၊ ချိတ်ဆက်ထားသောကိရိယာ။
၂.၂ သင်၏ကွန်ပျူတာစနစ်သည်ဆိုက်ကိုသုံးရန်လိုအပ်သော သက်ဆိုင်ရာနည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များအားလုံး နှင့် သဟဇာတဖြစ်‌ကြောင့်း သေချာရန် သင့်တွင်တာဝန်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ၀က်ဘ်ဆိုက် ၏ မည်သည့်အကြောင်းအရာသည် ကူးစက်ခြင်း၊ ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့် (သို့မဟုတ်) ပျက်စီးစေသော ကုဒ် ဂုဏ်သတ္တိများ မရှိကြောင်း အာမမခံနိုင်ပါ။ ဒေတာအချက်အလက်များ အ၀င်အထွက် နှင့် စိတ်ချရမှုတို့အတွက် သင်၏အထူးလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် လုံလောက်သော သီးခြား လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ နှင့် ဗိုင်းရပ်စ်စစ်ဆေးမှုများ (ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးနှင့်အခြားလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုများအပါအ၀င်)အား အကောင်အထည်ဖော်ရန် သင့်တွင် တာဝန် ရှိသည်။
၂.၃ အခါအားလျော်စွာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ မှတ်ပုံတင်ထားသောအသုံးပြုသူများအား ဆိုဒ် (သို့) အချို့သောအင်္ဂါရပ်များ (သို့) အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုံးသို့ ၀ င်ရောက်ခွင့်ကို ကန့်သတ်နိုင်ပါ သည်။ သင်ရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ၊ သုံးစွဲသူမှတ်ပုံတင်ကုဒ်၊ စကားဝှက် (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ၎င်းကိုပေးအပ်လျှင် သင်သည် ဤအချက်အလက်များကို လျှို့ဝှက်ထားသင့်ပြီး ၎င်းကိုမည်သည့် တတိယအဖွဲ့အစည်းသို့မျှမထုတ်ဖော်ရပါ။ ကျွန်ုပ်တို့က သင့်ကိုရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ၊ ခွဲဝေပေးသည်ဖြစ်စေ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ကျွန်ုပ်တို့၏ထင်မြင်ချက်အရသင်သည် ဤအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအား လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက သုံးစွဲသူမှတ်ပုံတင်အမှတ်အသား (သို့) စကားဝှက်ကိုပိတ်ထားဖို့ရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ သင်၏ အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမှတဆင့်ဆိုက်ကို ၀င်ရောက်သောသူတိုင်းသည် ဤအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များသိရှိပြီး ၎င်းတို့ကိုလိုက်နာကြောင်းသေချာစေရန် သင့်တွင်သာတာဝန်ရှိသည်။
၂.၄ ဆိုဒ်၌ ဝယ်ယူမှုတွင် အချို့သောထုတ်ကုန်များ နှင့် ၀န်ဆောင်မှုများသည် ဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားသောအသက်အရွယ်လိုအပ်ချက်မူတည်ပါသည်။ ဤအသက်အရွယ်သတ်မှတ်ချက်များ နှင့် မကိုက်ညီသောဈေးဝယ်သူများအား ဤထုတ်ကုန်များ (သို့) ၀န်ဆောင်မှုများကို ဥပဒေအရခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ ၊ သင်အသက်မပြည့်ပါက၊ ဤဆိုဒ်မှတဆင့်ဤထုတ်ကုန် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမှာယူရန် မလုပ်ဆောင်သင့်ပါ။
၃.၁ ဆိုဒ်ရှိအချက်အလက်များတိကျသေချာစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကြိုးစားအားထုတ်မှုများကိုသုံးလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး သို့သော် ဆိုဒ်ပေါ်တွင် ရှိသောဝေဖန်ချက် နှင့် အခြားအကြောင်းအရာများသည် သင် မှီငြမ်းအားကိုးသင့်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ကို ပေးရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စည်းကမ်းချက်များ နှင့် အခြေအနေများ (သို့မဟုတ်) ကိုယ်ပိုင်လုံခြုံရေးမူဝါဒကျင့်သုံးသော အတိုင်းအတာ မှ လွဲ၍ မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်သည် တိကျမှု၊ ပြည့်စုံမှု၊ နောက်ဆုံးပေါ်အချက်အလက်များ နှင့် ဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသောအတိုင်းအတာအထိ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စားပြုခြင်းမရှိကြောင်း နှင့် အာမခံမည်မဟုတ်မည်ဖြစ်ပြီး သင် (သို့မဟုတ်) သင်ဤသတင်းအချက်အလတ်ကိုပြောဆိုသော မည်သူ့ကိုမဆို ဤသတင်းအချက်အလက်များ အပေါ်မှီခိုမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆုံးရှုံးမှုများ သို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
၃.၂။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူဖန်တီးထားသောအကြောင်းအရာများတွင် ဖော်ပြထားသောအမြင်များသည် ထိုသုံးစွဲသူများ၏ ထင်မြင်ချက်များဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ထင်မြင်ယူဆချက်များအား ကိုယ်စားမပြုပါ။
၃.၃။ ဆိုဒ်၌မမှန်ကန်သော အချက်အလက်များတွေ့ရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ၊ ၎င်းကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ အမြန်ဆုံးပြင်ပေးနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစား၍ ပြန်လည်ပြင်ဆင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၄.၁ ဆိုဒ် (“ IPR content ”) ရှိ ပစ္စည်း နှင့် သတင်းအချက်အလက်အားလုံး၌ မူပိုင်ခွင့်၊ ဒေတာအခြေခံလုပ်ပိုင်ခွင့်များ၊ အမှတ်တံဆိပ်အမည်များ နှင့် အခြားအသိဥာဏ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများကို ကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ဆိုင်သည်။
၄.၂ သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ၊ စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သောအသုံးပြုမှု နှင့် သတင်းအချက်အလက်များအတွက် ဆိုဒ်၌ IPR အကြောင်းအရာ၏ မိတ္တူများကိုသင် download (သို့မဟုတ်) print ထုတ်နိုင်ပါသည်။ သင်သည် IPR အကြောင်းအရာ၏ မိတ္တူများကို ကူးယူခြင်း (သို့မဟုတ်) ထုတ်ယူပါက မူလပစ္စည်း၌ပါဝင်သော မူပိုင်ခွင့် (သို့မဟုတ်) အခြားအသိဥာဏ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာသတိပေးချက်များကို သင်ထိန်းသိမ်းထားရမည်။
၄.၃ သင့်ဆိုဒ်၏ IPR content ၊ ပုံစံအပြင်အဆင်၊ ကုဒ်များကိုကော်ပီကူးရန် (သို့) လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏သီးခြားသဘောတူညီချက်မပါရှိသည့် မည်သည့်စီးပွားရေးရည်ရွယ်ချက် နှင့် အခြားစီးပွားဖြစ်အမြတ်ထုတ်မှုများအတွက်မဆို archive (သို့မဟုတ်) database တစ်ခုဖန်တီးရန်ခွင့်မပြုပါ။
၄.၄ ကျွန်ုပ်တို့၏အမည်အား ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုတင်ရေးသားထားသောသဘော တူညီချက်မပါရှိဘဲ ဆိုဒ်ရှိပစ္စည်းများဖြန့်ဖြူးခြင်းအားကြော်ငြာခြင်း (သို့) လူသိများခြင်းအပါအ၀င် မည်သည့်နည်းနှင့်မျှအသုံးမပြုနိုင်ပါ။
၅။ အသုံးပြုသူပြုလုပ်ထားသည့် အကြောင်းအရာ
အကြောင်းအရာများ (သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာများမှအပ) အား ဆိုဒ်သို့ တင်ခြင်းအားဖြင့် ဤသဘောတူညီချက်များအားသင်၏သဘောတူညီချက် နှင့် အတူတင်ပြချက်ကို တင်ပြခြင်းအားဖြင့် ဤအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များသည် မည်သည့်အသိဥာဏ် ပစ္စည်းဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကို မဆိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးအပ်သောတာဝန်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။သင်ဆိုဒ်သို့တင်ထားသော ဘယ်အကြောင်းရာမဆို လျှို့ဝှက်ထားရန်မဟုတ်၊ ကုမ္ပဏီ နှင့် သာသက်ဆိုင်သည် မဟုတ်ဟု ယူဆမည်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့တွင် အသုံးပြုခြင်း၊ ကူးယူခြင်း၊ ဖျက်ချခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း နှင့် ကြားခံကုမ္ပဏီများသို့ ထိုကဲ့သောအကြောင်းအရာများအား (မကန့်သတ်) အသုံးပြုပြီး မည်သည့်မီဒီယာတွင်မဆို (အသိအမှတ်ပြုခြင်းရှိ၊ မရှိ) လျှို့ဝှက်စွာထုတ်ဖော်ပြသရန် ကျွန်တော်တို့တွင်အခွင့်အရေးရှိသည်။
၆။ ဤဝက်ဘ်ဆိုက် နှင့် အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့လင့်ခ်များ
၆.၁ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆိုဒ် မှ တိုက်ရိုက်တတိယအဖွဲ့အစည်းများ၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်များကို ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မည့် လင့်ခ်များကို သင်အားအခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ထိုကဲ့သို့ ကြားခံကုမ္ပဏီများ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်မရှိကြောင်း၊ အခြားဖော်ပြထားခြင်းမရှိလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည်တတိယပါတီများ နှင့် ဆက်ဆံရေးမရှိသလို ၄◌င်းဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ပါဝင်ပံ့ပိုးကူညီမှုများလည်းမရှိပါ။ သင့်အနေဖြင့် ၄◌င်းဆိုဒ်များအား ကလစ်ခြင်း နှင့် သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ ထိန်းချုပ်သည့် ဆိုဒ်ကိုစွန့်ခွာသည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြားခံကုမ္ပဏီများ၏ သင့်ဒေတာများအသုံးပြုခြင်း၊ ဆိုဒ်များ ၏ အကြောင်းအရာများ၊ ၄◌င်းဝက်ဘ်ဆိုက်များ နှင့် အခြားဆက်စပ်သည့် ပြဿနာများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
၆.၂ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်အရ အခြားအင်တာနက် ၀က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု မှ အခြားမည်သည့်လင့်ခ်မဆို ဤဆိုဒ်ရှိပစ္စည်းများ (သို့) သတင်းအချက်အလက်များ အား တားမြစ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကန့်သတ်ထားသည်။ဤ လုပ်ပိုင်ခွင့် အား မထိခိုက်စေဘဲ၊ သင် ဆိုက်သို့လင့်ခ်ချိတ်လိုလျှင်၊ သင်ink လုပ်ထားသောအခြေခံပေါ်တွင်သာလုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်း၊ ဆိုက်၏ပင်မစာမျက်နှာနှင့်ပုံတူပွားခြင်းကိုအောက်ပါအခြေအနေများအတိုင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။
သင်သည် လိုဂို၏အရွယ်အစား (သို့) အသွင်အပြင်ကိုသင်ဖယ်ရှားခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းများမပြုလုပ်ရပါ။
သင်သည်၀က်ဘ်ဆိုက် (သို့) အခြားပတ် ၀န်းကျင် (သို့မဟုတ်) နယ်နိမိတ်၀န်းကျင်တစ်ခုကိုမဖန်တီးရပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်သော မည်သည့်ထုတ်ကုန် (သို့မဟုတ်) ၀န်ဆောင်မှုမဆိုထောက်ခံကြောင်းသင်မဆိုလိုပါနှင့်။
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးကိုလွဲမှားစွာတင်ပြခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ နှင့် ပတ်သက်သောအခြားမည်သည့် မှားယွင်းသော (သို့မဟုတ်) လွဲမှားသည့် မည်သည့် သတင်းအချက်အလက်မျှတင်ပြခြင်းမပြုရပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏စာဖြင့်ရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်မပါဘဲ ဆိုဒ် ပေါ်တွင်ပြသထားသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအား အသုံးမပြုပါနှင့်။
သင်မပိုင်ဆိုင်သော ၀က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု နှင့် မဆက်သွယ်ပါနှင့်။
၆.၃ ဝဘ်ဆိုက်သို့ သင်လင့်ခ်ချိတ်ထားသော မည်သည့်၀က်ဘ်ဆိုက်တွင်မဆို နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသော၊ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော၊ အငြင်းပွားဖွယ်အကြောင်းအရာများ၊ အခြားမည်သူတစ်ဦး တစ်ယောက်၏ အသိဥာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်များ နှင့် အခြားအခွင့်အရေးများ မဆို ချိုးဖောက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) အခြားတည်ဆဲဥပဒေများ စည်းမျဉ်းများနှင့်မကိုက်ညီနိုင်ပါ။
၇။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်
၇.၁ ဤ ဆိုဒ်သည်သုံးစွဲသူများအားစိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်သော်လည်း (ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများနှင့်/ (သို့မဟုတ်) ကိုယ်ပိုင်လုံခြုံရေး မူဝါဒကျင့်သုံးသည့်အတိုင်းအတာ မှလွဲ၍) ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သည့်တာဝန်ယူမှုမျှ လက်ခံခြင်းမရှိသလို ဤဆိုဒ် နှင့် ၎င်း၏အကြောင်းအရာများ နှင့် စပ်လျဉ်း ၍ အာမခံချက်များ (သို့မဟုတ်) အခြေအနေများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။ ဤကဲ့သို့ အတိုင်းတာတစ်ခုထိ တာဝန်ယူမှုအား ဥပဒေအရချန်လှပ်နိုင်ပါသည်။
၇.၂ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြည်တွင်း နှင့် ပုဂ္ဂလိကအသုံးပြုရန် ဆိုဒ်အာပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ဤအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း မှလွဲ၍ ဥပဒေအရသက်ရောက်သောစည်းကမ်းချက်များအားလုံး မပါဝင်ပါ။ ဤတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေါ့ဆမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော သေဆုံးမှု (သို့) ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်ယူမှု (သို့မဟုတ်) မမှန်ကန်သော လွဲမှားခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန် နှင့် တည်ဆဲ ဥပဒေအောက်ရှိ မရသောအခြားမည်သည့်တာဝန်ယူမှု မဆို ကန့်သတ်ခြင်းမရှိပါ။
၈.၁ Total Wellness Lifestyle Beauty Mart Co.,Ltd. သည် မြန်မာနိင်ငံ တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်နံပါတ်သည် 111305315 ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏မှတ်ပုံတင်ရုံးလိပ်စာသည်
၈.၂ အမှတ် ၀၀၄ ၊ ကွန်ဒို (စီ) ၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ ၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာ လမ်းသစ် ၊ ဗဟန်းမြို့နယ် ၊ရန်ကုန်မြို့။ ဆက်သွယ်ရန်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀န်ဆောင်မှုလိပ်စာတွင် ကျွန်ုပ်တို့အားတရားဝင်တရား၀င်သတိပေးချက်များကိုပေးပို့နိုင်ပါသည်။
၈.၃ ရပိုင်ခွင့်ကိုပြဠာန်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အခွင့်အရေးအားစွန့်လွှတ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဤအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများအောက်တွင် သင်၏ အခွင့်အရေးများ ကို ကန့်သတ်ခြင်း နှင့် လွှဲပြောင်းခြင်းများ မပြုနိုင်ပါ။
၈.၄ ဤအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ၏ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းမဆို ဥပဒေ နှင့် မကိုက်ညီကြောင်း တွေ့ရှိလျှင် ဤအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ အခြားအစိတ်အပိုင်းအားလုံးအား မထိခိုက်ဘဲဆက်လက်တည်ရှိနေလိမ့်မည်။
၈.၅ တည်ဆဲ ဥပဒေသည် ဤအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ နှင့် သက်ဆိုင်သည်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ နှင့် ဈေးဝယ်သူများ အကြား ငြင်းပွားမှု တစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်လာပါက (သို့) ဤအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ နှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သော ကိစ္စများအား သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးများမှသာဖြေရှင်းလိမ့်မည်။
၉.၁ ဆိုဒ် နှင့် ပတ်သက်သော ပြဿနာများတွေ့ကြုံခြင်း (သို့) မှတ်ချက်ပေးလိုလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
၁၀.၁။ ဤအချက်အလက်များအား ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာတွင် နောက်ဆုံးပြုပြင်မွမ်းမံမှုလုပ်ခဲ့ပါသည်။